Iyo yakamirirwa kwenguva refu vhezheni yeIOS 14.5 yave kuwanikwa kune vese vashandisi | IPhone nhau
Iyo yakamirirwa kwenguva refu vhezheni yeIOS 14.5 yave kuwanikwa kune vese vashandisi
Jordi Gimenez | 26/04/2021 19:00 | Yakagadziridzwa ku 26/04/2021 19:06 | iOS 14
Iyi vhezheni nyowani inowedzera yakanaka ruoko rwenhau kana ichienzaniswa neshanduro dzapfuura uye pamusoro pezvose zvinowedzera imwe inotarisirwa zvakanyanya nevashandisi veApple neApple Watch munguva dzino dzakaoma nedenda re COVID-19 richiri kutimanikidza. Mushure memavhiki akati wandei uye akati wandei beta shanduro dzakamirira iyo kusvika kweiyi vhezheni yeIOS 14.5 uye watchOS 7.4, Apple yakaburitsa ese maminetsi mashoma apfuura.
1 Kuvhura iPhone neFace ID pasina kubvisa mask yako
1.1 PlayStation uye Xbox controllers inoenderana ne iPhone
1.2 Sarudzo ye "wedzera zvinhu" muApp yekutsvaga
1.3 Vhidhiyo pfupiso yezvinhu zvitsva zveIOS 14.5
Kuvhura iPhone neFace ID pasina kubvisa mask yako
Iyi pasina mubvunzo ndiyo hunyanzvi hunotarisirwa kwazvo mune iyi vhezheni itsva. Apple inowedzera mune vhezheni yeIOS 14.5 mune sarudzo kiinura yedu iPhone tichishandisa Face ID ine mask iri, chimwe chinhu chisingafungidzike kune vashandisi vazhinji vakatokumbira kudzoserwa kweTouch ID kuti vakwanise kuvhura chishandiso vasina kubvisa mask.
watchOS 7.4 ine zvakawanda zvekuita nesarudzo iyi. Uye ndeyekuti iyo nyowani vhezheni yeanoshanda system yeApple Watch yakakosha chose kuti izvi zvishande, saka ese ari maviri mavhezheni shanduro anodikanwa kuti ashandiswe.
Kuita basa iri Isu tinofanirwa kuenda kumhedzisiro ye iPhone, tora chikamu chepassword uye ipapo Face ID nekodhi. Ikoko isu tichawana sarudzo yekuvhura iyo iPhone neApple Watch, saka isu tinofanirwa kuve nayo inoshanda.
Rangarira kuti iyi sarudzo haina kushandiswa kubhadhara kuburikidza neApple Pay, kuwana mashandisiro ebhangi rako uye kwete ezvimwe zvikumbiro zvinoda Face ID senge 1Password, zviri pachena ndezvekuti kuvhura foni ichave Yekubatsira kukuru hapana chikonzero chekubvisa mask yako kana kiyi mune kodhi.
PlayStation uye Xbox controllers inoenderana ne iPhone
Iyi ndeimwe yesarudzo huru dzinowedzerwa mushanduro yeIOS 14.5 uye ndizvo PlayStation uye vatongi veXbox vanoenderana nePhones. Kuita kumisikidza kweaya marongero, kupinda kweBluetooth kunodiwa uye nekudzvanya bhatani reChiteshi cheBudiriro uye bhatani rezvisarudzo, zvinogona kuve zvakapetwa zviri nyore sezvaunoona muvhidhiyo yakaitwa newatinoshanda naye Luis Padilla.
Zvekuti izvi zvinodzora zvinoenderana neiyo iPhone zvinotipa kutamba kwakawanda, zvisati zvamboitika zvataurwa nani Iyi sarudzo zvakare inowanikwa izvozvi kubva pakuburitswa kweIOS 14.5.
Sarudzo ye "wedzera zvinhu" muApp yekutsvaga
MaAirTags, mamwe mamodheru ebhasikoro emagetsi kana Chipolo, pakati pezvimwe zvakawanda zvinhu zvekushandisa zvinoenderana nesarudzo yeApple "Tsvaga". Izvi zvitsva "Wedzera zvinhu" sarudzo Izvo zvinotibvumidza isu kuti tipe yambiro kana kuona zvakarasika zvinhu munzvimbo yavo yekupedzisira, chimwe chinhu chinodarika kusvika kweAirTags.
Pedyo ne 200 emoji nyowani izvo zvakawedzerwa kuti iwe ugone kunakidzwa nazvo, manzwi matsva aSiri (muUS) izvo zvinotibvumidza isu kushandura izwi remubatsiri kana kusvika kwe5G kune iyo Dual SIM yeiyo iPhone yaive yakaganhurirwa kuLTE, kuwedzera kune kumwe kugadziriswa kwezvikanganiso uye kutadza kwakaonekwa mumidziyo kune akati wandei ekuvandudza kwakawanda akawedzerwa mune iyi vhezheni itsva yakatangwa maminetsi mashoma apfuura.
Ini pachangu uye ini ndanga ndayambira kuti ini ndaive ndisina iyi vhezheni yeIOS 14.5 yakaiswa mu beta, zhinji dzenhau idzi dzinouya sechishamiso kwandiri nhasi. Izvi ndinofungidzira zvichaitika kwandiri nevamwe vazhinji vashandisi vari mumamiriro akafanana neni saka usamirira zvakare uye dhawunorodha iyi vhezheni itsva iyo Apple ichangoburitsa yeApple neApple Watch.
Vhidhiyo pfupiso yezvinhu zvitsva zveIOS 14.5
Mavhiki mashoma apfuura tanga tine vhidhiyo inowanikwa pane yedu YouTube chiteshi matakakuratidza iwe dzese nhau dzeIOS 14.5, asi zvaive zvevashandisi vaive ne beta vhezheni izvozvi tinogona kutaura izvozvo iyi vhezheni yakamirirwa kwenguva refu yave kuwanikwa kune wese munhu.
Usamirira zvakare uye gadziridza yako iPhone uye Apple Watch nekukurumidza sezvazvinogona kugamuchira idzi nhau dzese dzakaitwa naApple mune iyo nyowani iOS.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 14 » Iyo yakamirirwa kwenguva refu vhezheni yeIOS 14.5 yave kuwanikwa kune vese vashandisi
Zvinondipa kukanganisa: Haikwanise kumisikidza kutaurirana neApple Watch.
Yakanyatso kubatana ...
Ndini ndega here mushure mekugadzirisa iyo HomePod kune vhezheni 14.5 ine mavhoriyamu ekudzora (- +) anogara ari pamusoro pepaneru pawo?
Yakanga isiri yakadai kare. Iye zvino vanogara nguva dzose pavanenge vakamira.
Mhoroi munhu wese, ruzivo rwekuvhura nemask rwakangondishandira kumba, newifi nebluetooth zvakabatana pa iPhone 11 pro uye wachi nhepfenyuro 4. Zvese zvishandiso zvakagadziridzwa kune yazvino vhezheni yeiyo.
Pangosvika ini ndiri mumugwagwa, haichashandi chero nzira.
Zvaitika kwauri ?? .. wakambozviedza here ?? Kumbira kana uchigona kundibatsira ... ndatenda